09.05.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“मीठे बच्चे– तिमी आत्माहरूको प्यार एक बाबासँग छ , बाबाले तिमीलाई आत्मासँग प्यार गर्न सिकाउनु भएको छ , शरीरसँग होइन।”
कुन पुरुषार्थमा नै मायाले विघ्न ल्याउँछ? मायाजित बन्ने युक्ति के हो?
तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ– मैले बाबालाई याद गरेर आफ्नो पापलाई भस्म गर्नु छ। यस यादमा नै मायाको विघ्न पर्छ। बाबा उस्तादले तिमीलाई मायाजित बन्ने युक्ति बताउनु हुन्छ। तिमीले उस्तादलाई पहिचान गरेर याद गर्यौ भने खुसी पनि हुन्छ, पुरुषार्थ पनि गरिरहन्छौ र सेवा पनि खुब गर्नेछौ। मायाजित पनि बन्छौ।
इस पाप की दुनियाँ से......
रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, अर्थ पनि बुझ्यौ। दुनियाँमा कसैले पनि अर्थ बुझेका छैनन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ– हाम्रो आत्माको प्रेम परमपिता परमात्मासँग छ। आत्माले आफ्ना बाबा परमपिता परम आत्मालाई पुकार्छ। प्यार आत्मामा छ वा शरीरमा? अहिले बाबाले सिकाउनु हुन्छ– प्यार आत्मामा हुनुपर्छ। शरीर त समाप्त भएर जान्छ। प्यार आत्मामा हुन्छ। अहिले बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– तिम्रो प्यार परमात्मा बाबासँग हुनुपर्छ, शरीरसँग होइन। आत्माले नै आफ्नो पितालाई पुकार्छ– पुण्य आत्माहरूको दुनियाँमा लिएर जानुहोस् भनेर। तिमीले सम्झन्छौ– हामी पाप आत्मा थियौं, अहिले फेरि पुण्य आत्मा बनिरहेका छौं। बाबाले तिमीलाई युक्तिले पुण्य आत्मा बनाइरहनु भएको छ। बाबाले बताएपछि बच्चाहरूलाई अनुभव हुन्छ र बुझ्छन्– हामी बाबाद्वारा, बाबाको यादद्वारा पवित्र पुण्य आत्मा बनिरहेका छौं। योगबलद्वारा हाम्रो पाप भस्म भइरहेको छ। बाँकी गंगा आदिमा कुनै पाप धोइँदैन। मनुष्यले गंगा स्नान गर्छन्, शरीरमा माटो दल्छन् तर त्यसबाट कुनै पाप धोइँदैन। आत्माको पाप योगबलबाट नै निस्किन्छ। मैला निस्किन्छ, यो त बच्चाहरूलाई नै थाहा छ र निश्चय छ– हामीले बाबालाई याद गर्यौं भने हाम्रो पाप भस्म हुन्छ। निश्चय छ भने फेरि पुरुषार्थ गर्नुपर्यो नि। यस पुरुषार्थमा नै मायाले विघ्न ल्याउँछ। बलवानसँग माया पनि बलवान भएर लडाईं गर्छ। कच्चासँग के लडाईं गरोस्! बच्चाहरूले सदैव यो ख्याल राख्नु पर्छ– मलाई मायाजित जगतजित बन्नु छ। माया जिते जगतजितको अर्थ पनि कसैले बुझेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ– तिमीले कसरी मायामाथि विजय पाउन सक्छौ। माया पनि समर्थ छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई उस्ताद मिल्नुभएको छ। उहाँलाई पनि नम्बरवार बिरलै कसैले चिनेका छन्। जसले चिनेका छन् उनीहरूलाई खुसी पनि हुन्छ। पुरुषार्थ पनि स्वयंले गर्छन्। सेवा पनि खुब गर्छन्। अमरनाथमा धेरै मानिस जान्छन्। अहिले सबै मानिसहरूले भन्छन्, विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ? अहिले तिमीले सबैलाई सिद्ध गरेर बताउँछौ– सत्ययुगमा कस्तो सुख शान्ति थियो। सारा विश्वमा शान्ति थियो। यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो, कुनै अरू धर्म थिएन। आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला सत्ययुग थियो फेरि सृष्टिले चक्कर त अवश्य लगाउनु छ। चित्रबाट तिमीले बिलकुलै स्पष्ट बताउँछौ, कल्प पहिला पनि यस्ता चित्र बनाइएका थिए। दिन-प्रतिदिन उन्नति हुँदै जान्छ। कतै बच्चाहरूले तिथि मिति लेख्न भुल्छन्। लक्ष्मी-नारायणको चित्रमा तिथि-मिति अवश्य हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा बसेको छ– हामी स्वर्गवासी थियौं, अब फेरि बन्नु छ। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति पद पाउँछ। अहिले बाबाद्वारा तिमी ज्ञानको अथोरिटी बनेका छौ। भक्ति अब समाप्त हुन्छ। सत्ययुग-त्रेतामा भक्ति कहाँ थियो र? पछि आधाकल्प भक्ति चल्छ। यो पनि अहिले तिमी बच्चाहरूलाई समझमा आउँछ। आधा कल्पपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। सारा खेल नै तिम्रो हो। ८४ को चक्र यहाँ नै हुन्छ। भारत नै अविनाशी खण्ड हो, यो पनि पहिला कहाँ थाहा थियो र। लक्ष्मी-नारायणलाई गड-गडेज भन्छन् नि। कति उच्च पद छ तर पढाइ कति सहज छ। यो ८४ को चक्र पूरा गरेर फेरि हामी फर्केर जान्छौं। ८४ को चक्र भन्दा बुद्धि माथि जान्छ। अहिले तिमीलाई मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन सबै याद छ। पहिला सूक्ष्मवतन के हो? यो कहाँ थाहा थियो र। अहिले तिमीलाई थाहा छ– त्यहाँ कसरी मुवीमा बातचित गर्छन्। मुवी चलचित्र पनि निस्किएको छ। तिमीलाई सम्झाउँदा सहज हुन्छ। साइलेन्स, मुवी, टकी। तिमीले सबै जानेका छौ लक्ष्मी-नारायणको राज्यदेखि लिएर अहिलेसम्म सारा चक्र बुद्धिमा छ।
तिमीलाई गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा यही फिक्र रहोस्– मलाई पावन बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा-रहँदै पनि यस पुरानो दुनियाँबाट ममत्व मेटाइदेऊ। बच्चाहरू आदिलाई सम्हाल, तर बुद्धि बाबातर्फ होस्। भन्नुहुन्छ– हातले काम गर्दा बुद्धि बाबातर्फ रहोस्। बच्चाहरूलाई खुवाऊ, पियाऊ, स्नान गराऊ, तर बुद्धिमा बाबाको याद होस् किनकि जानेका छौ पापको बोझ धेरै छ। त्यसैले बुद्धि बाबातर्फ लागिरहोस्। उहाँ प्रियतमलाई धेरै याद गर्नु छ। प्रियतम बाबाले तिमी सबै आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर, यो पार्ट पनि अब चलिरहेको छ फेरि ५ हजार वर्षपछि चल्छ। बाबाले कति सहज युक्ति बताउनु हुन्छ। कुनै मेहनत छैन। कसैले भन्छन्– म यो गर्न सक्दिनँ, मलाई धेरै मेहनत महसुस हुन्छ, यादको यात्रा धेरै मुश्किल छ। अरे, तिमीले बाबालाई याद गर्न सक्दैनौ! बाबालाई कहाँ भुलिन्छ र। बाबालाई त राम्रोसँग याद गर्नु छ तब विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी सदा स्वस्थ बन्छौ। नत्र बन्दैनौ। सधैं तिमीलाई धेरै राम्रो राय मिल्छ। यो एउटै दबाईले पूरा काम गर्छ। म ग्यारेन्टी गर्छु– यस योगबलबाट तिमी २१ जन्मको लागि कहिल्यै रोगी बन्दैनौ। केवल बाबालाई याद गर। कति सहज युक्ति छ। भक्ति मार्गमा अनजानमा याद गर्थ्यौ। अहिले बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले सम्झन्छौ– बाबा! हामी कल्प पहिला पनि हजुरको पासमा आएका थियौं, पुरुषार्थ गर्थ्यौं । पक्का निश्चय भयो। हामीले नै राज्य गर्थ्यौं , हामीले गुमायौं फेरि बाबा आउनु भएको छ। उनीहरूबाट राज्य भाग्य लिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर अनि राजाईलाई याद गर। मनमनाभव। अन्त मति सो गति हुन्छ। अब नाटक पूरा हुन्छ, फर्केर जान्छौ। बाबा आउनु भएको छ सबैलाई लिएर जानको लागि। जसरी वरले बधुलाई लिन आउँछन्। बधुलाई धेरै खुसी हुन्छ, म आफ्नो घर जान्छु। तिमीहरू सबै सीता हौ एक रामका। रामले नै तिमीलाई रावणको जेलबाट छुटाएर लिएर जानुहुन्छ। मुक्ति दाता एकै हुनुहुन्छ, रावण राज्यबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। भन्छन् पनि– यो रावण राज्य हो, तर यथार्थ बुझ्दैनन्। अहिले बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, अरूलाई सम्झाउनको लागि राम्रा-राम्रा प्वाइन्टहरू दिइन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो लेखिदेऊ– बाबाले कल्प पहिलाजस्तै विश्वमा शान्ति स्थापना गरिरहनु भएको छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना भइरहेको छ। विष्णुको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो नि। विष्णु नै लक्ष्मी-नारायण थिए, यो पनि कसैले कहाँ बुझ्छन् र! विष्णु र लक्ष्मी-नारायण तथा राधा-कृष्णलाई अलग-अलग सम्झन्छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ, स्वदर्शन चक्रधारी पनि तिमी नै हौ। शिवबाबा आएर सृष्टि-चक्रको ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँद्वारा अहिले हामी पनि मास्टर ज्ञानसागर बनेका छौं। तिमी नदीहरू हौ नि। यो त बच्चाहरूको नै नाम हो।
भक्तिमार्गमा मनुष्यले कति स्नान गर्छन्, कति भड्किन्छन्। धेरै दान-पुण्य आदि गर्छन्, धनवानहरूले त धेरै दान गर्छन्। सुन पनि दान गर्छन्। तिमीले पनि अहिले सम्झन्छौ– हामी कति भड्किएका थियौं। अहिले हामी कुनै हठयोगी त होइनौ। हामी त राजयोगी हौं। पवित्र गृहस्थ आश्रमका थियौं, फेरि रावण राज्यमा अपवित्र बनेका हौं। ड्रामा अनुसार बाबाले फेरि गृहस्थ धर्म बनाइरहनु भएको छ, अरू कसैले बनाउन सक्दैन। मनुष्यले तिमीलाई भन्छन्– सबै पवित्र बन्यौं भने दुनियाँ कसरी चल्छ? भन– यतिका सबै संन्यासी पवित्र रहन्छन् फेरि दुनियाँ कहाँ बन्द भएको छ र! अरे सृष्टि यति बढेको छ, खानको लागि अनाज पनि छैन फेरि सृष्टि किन बढाउने? अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, बाबा हाम्रो सम्मुख उपस्थित हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई यी आँखाले देख्न सकिँदैन। बुद्धिद्वारा जानिन्छ– बाबाले हामी आत्माहरूलाई पढाउनु हुन्छ, हाजिर-नाजिर हुनुहुन्छ।
जसले विश्व शान्तिको कुरा गर्छन्, उनीहरूलाई तिमीले बताऊ– विश्वमा शान्ति त बाबाले गराइरहनु भएको छ। त्यसको लागि नै पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ, ५ हजार वर्ष पहिला पनि विनाश भएको थियो। अहिले पनि यो विनाश सामुन्ने खडा छ फेरि विश्वमा शान्ति हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यही कुरा छ। दुनियाँमा कसैले जान्दैन। कोही छैन जसको बुद्धिमा यो कुरा होस्। तिमीलाई थाहा छ– सत्ययुगमा सारा विश्वमा शान्ति थियो। एक भारतखण्ड सिवाय अरू कुनै खण्ड थिएन। पछि अरू खण्ड भएका हुन्। अहिले कति खण्ड छन्। अब यस खेलको पनि अन्त्य हुन्छ। भन्छन् पनि– भगवान अवश्य हुनुपर्छ, तर भगवान को र कुन रूपमा आउनु हुन्छ, यो जानेका छैनन्। कृष्ण त हुन सक्दैनन्। न कसैले प्रेरणाबाट वा शक्तिद्वारा काम गराउन सक्छ। बाबा त परम प्रिय हुनुहुन्छ, उहाँबाट वर्सा मिल्छ। बाबाले नै स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश पनि उहाँले नै गराउनु हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– सत्ययुगमा यी लक्ष्मी-नारायण थिए। अब फेरि स्वयं पुरुषार्थबाट यस्ता बनिरहेका छन्। नशा रहनु पर्छ नि। यहाँ राज्य गर्थ्यौं। शिवबाबाले राज्य दिएर जानु भएको थियो, यस्तो भनिदैन शिवबाबाले राज्य गरेर जानु भएको थियो। राज्य दिएर जानु भएको थियो। लक्ष्मी-नारायणले राज्य गर्थे नि। फेरि बाबा राज्य दिन आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! मलाई याद गर अनि चक्रलाई याद गर। तिमीले नै ८४ जन्म लिएका हौ। कम पुरुषार्थ गर्छ भने सम्झ यसले कम भक्ति गरेको छ। धेरै भक्ति गर्नेले पुरुषार्थ पनि धेरै गर्छन्। कति स्पष्ट गरेर सम्झाउनु हुन्छ तर बुद्धिमा बसे त हो नि।
तिम्रो काम हो पुरुषार्थ गराउनु। कम भक्ति गरेको छ भने योग लाग्दैन। शिवबाबाको याद बुद्धिमा टिक्दैन। कहिल्यै पनि पुरुषार्थमा सुस्त हुनु हुँदैन। मायालाई बलियो देखेर हर्ट फेल हुनु हुँदैन। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ– आत्माले नै सबैथोक गर्छ। शरीर त खत्तम भएर जान्छ। आत्मा निस्किएर गयो, शरीर माटो भयो। त्यो फेरि त मिल्ने छैन। फेरि उनलाई याद गरेर रूनाले फाइदा नै के? त्यही चीज फेरि कहाँ मिल्छ र! आत्माले त गएर अर्को शरीर लियो। अहिले तिमी कति उच्च कमाई गर्छौ। तिम्रो नै जम्मा हुन्छ, बाँकी सबैको हुँदैन।
बाबा भोला व्यापारी हुनुहुन्छ तब त तिमीलाई मुठी चामलको बदलामा २१ जन्मको लागि महल दिनुहुन्छ, कति ब्याज दिनुहुन्छ। जति चाहन्छौ भविष्यको लागि जम्मा गर। तर यस्तो होइन, अन्त्यमा आएर जम्मा गर्न सक्छौ, त्यस समय लिएर के गर्ने? मूर्ख व्यापारी कहाँ हुनुहुन्छ र, विना काम ब्याज भरेर दिनुपरोस्। यस्तो कहाँ लिनुहुन्छ र। तिमीलाई मुठी चामलको बदला २१ जन्मको लागि महल मिल्छ। कति ब्याज मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– नम्बरवन भोला त म हुँ। हेर तिमीलाई विश्वको बादशाही दिन्छु, केवल तिमी मेरो बनेर सेवा गर। भोलानाथ हुनुहुन्छ तब त सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। अब तिमी छौ ज्ञान मार्गमा। अब बाबाको श्रीमतमा चल र बादशाही लेऊ। भन्छन् पनि– बाबा म आएको छु राजाई लिन। त्यो पनि सूर्यवंशीमा। अच्छा, तिम्रो मुखमा गुलाब। अच्छा!
१) श्रीमतमा चलेर बादशाही लिनु छ। मुठी चामल दिएर २१ जन्मको लागि महल लिनु छ। भविष्यको लागि कमाई जम्मा गर्नु छ।
२) गृहस्थ व्यवहारमा रहेर यस पुरानो दुनियाँबाट ममत्व मेटाएर पूरा पावन बन्नु छ। सबैथोक गर्दा गर्दै बुद्धि बाबातर्फ लागिरहोस्।
हजार भुजावाला ब्रह्मा बाबाको साथको निरन्तर अनुभव गर्ने सच्चा स्नेही भव
वर्तमान समय हजार भुजावाला ब्रह्मा बाबाको रूपको पार्ट चलिरहेको छ। जसरी आत्मा विना भुजाले केही गर्न सक्दैन, त्यसैगरी बापदादा विना बच्चाहरूले केही गर्न सक्दैनन्। हर कार्यमा पहिला बाबाको सहयोग हुन्छ। जबसम्म स्थापनाको पार्ट हुन्छ, तबसम्म बापदादा बच्चाहरूको हर संकल्प र सेकेन्डमा साथ साथ हुनुहुन्छ, त्यसैले कहिल्यै पनि अलग हुने पर्दा लगाएर वियोगी नबन। प्रेमको सागरको लहरहरूमा लहराऊ, गुणगान गर, घायल नबन। बाबाको स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप सेवाको स्नेही बन।
अशरीरी स्थितिको अनुभव वा अभ्यास नै नम्बरवन आउने आधार हो।